के हो टर्बो चार्जर, कसरी गर्छ काम ? थाहा पाउनुस् यसका फाईदा - MeroAuto
के हो टर्बो चार्जर, कसरी गर्छ काम ? थाहा पाउनुस् यसका फाईदा
2076:3:5 5:57 AM
टर्बाे चार्जर एक मेकानिकल पार्टस हो, जसले इन्जिनमा हावाको फ्लोलाई बढाउन मद्दत गर्छ । सुइजरल्याण्डका इन्जिनियर अल्फ्रेड बुचीले सन् १९०५ मा यसको पहिलो प्याटेन्ट दर्ता गरेका थिए । तर बास्तविक प्रयोग भने १९२३ मा मात्र भएको थियो ।
पहिलो पटक यस टेक्नलोजीको प्रयोग पानी जहाजको इन्जिनमा भएको हो । जसको सहायताले १७५० हार्सपावर उत्पादन गरिरहेको इन्जिनबाट २५०० हर्सपावर पावर उत्पादन भएको थियो ।
प्रथम विश्वयुद्ध ताका यसको प्रयोग लडाकु जहाजहरुमा पनि व्यापक रुपमा भएको थियो । तर मोटरमा भने यसको प्रयोग सन् १९६३ बाट मात्र हुन सुरु गरेको हो ।
अमेरिकी कम्पनी सेभ्रोलेले आफ्नो पेट्रोल इन्जिनमा यसको पहिलो प्रयोग गरेको थियो । पछि सन् १९७८ मा मर्सिडिजले यसको प्रयोग पहिलो पटक डिजल इन्जिनमा गरेको हो ।
यूरोपियन बजारमा बिक्ने ७० प्रतिशत सवारीसाधनमा टर्बो चार्जर जडित हुने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले आएर प्राय सबै डिजल इन्जिन र केही पेट्रोल इन्जिनमा टर्बो चार्जरको प्रयोग हुने गरेको छ ।
त्यस्तै जापानको मोटरसाइकल कम्पनी कावासाकीले पहिलो पटक सन् १९७८ मै दुइपाङ्ग्रे सवारीमा पनि टर्बो चार्जरको प्रयोग गरेको थियो ।
आधुनिक सबै गाडीहरुमा टर्बो चार्जर प्रयोग गरिएको हुन्छ । सन् २०१९ मा अमेरिकामा बिक्ने गाडीहरु मध्य ३८ प्रतिशतमा टर्बो-चार्जर युक्त गाडी बिक्ने गरेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै यूरोपियन बजारमा बिक्ने ७० प्रतिशत सवारीसाधनमा टर्बो-चार्जर जडित हुने अनुमान गरिएको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा बन्ने गाडीहरुमा पनि टर्बो चार्जर जडान हुन थालेका छन् । नेपालमा पनि फाटफुट्ट बाटोमा टर्बो चार्जर जडित गाडी देखिन थालेका छन् ।
अझ नेपाल सरकारले गाडीमा सीसीको आधारमा कर निर्धारण गरेकोसँगै टर्बो जडित गाडीहरु आउने सम्भावना देखिएको छ । किनकी टर्बो जडित गाडी कम सीसीमै उत्कुष्ट पावर उत्पादन गर्न सक्षम रहेका छन् ।
कसरी काम गर्छ टर्बो चार्जरले ?
इन्जिनले प्राकृतिकरुपमा एयर फिल्टरबाट हावा तान्ने काम गर्छ, जुन कम्बस्चन चेम्बरमा गएर फ्यूलसँग मिसिएर जल्ने गर्छ । फलस्वरुप इन्जिनबाट शक्ति उत्पादन हुन्छ र गाडी चल्छ ।
एउटा टर्वाइनले इन्जिनबाट आएको दूषित तातो हावाल बाहिर फाल्ने काम गर्छ भने त्यहिसँगै जोडिएको अर्को टर्वाइन घुम्ने क्रममा बाहिरको ताजा हावा कम्प्रेस गरेर इन्जिनमा पठाउने काम गर्छ ।
कम्बस्चन चेम्बरमा फ्यूल जलेपछि त्यहाँबाट प्रदुशित ग्याँस पनि उत्पादन हुने गर्छ जुन एक्जस्ट पाईपबाट बाहिरी वातावरणमा मिसिन्छ । यो प्रदुशित हावा इन्जिनबाट बाहिर जाँदा ठूलो फोर्समा बाहिर निस्कने गर्छ । जसमा इनर्जी त्यतीकै खेर गइरहेको हुन्छ । टर्बो चार्जरले यहि इन्जिनबाट बाहिर जादै गरेको हावाको शक्तिलाई प्रयोग गरेर इन्जिनमा थप हावा पठाउने काम गर्छ । जसको सहयोगमा इन्जिनको प्रफर्मेस बढ्न गई धेरै पावर उत्पादन हुने गर्छ ।
टर्बो चार्जर इन्जिनमा एक्जस्ट पाइपसँगै टर्बो लगाइएको हुन्छ । विशेषतः यसमा दुईवटा टर्वाइन लगाइएको हुन्छ । एउटा टर्वाइनले इन्जिनबाट आएको दूषित तातो हावाल बाहिर फाल्ने काम गर्छ भने त्यहिसँगै जोडिएको अर्को टर्वाइन घुम्ने क्रममा बाहिरको ताजा हावा कम्प्रेस गरेर इन्जिनमा पठाउने काम गर्छ । यसरी कम्प्रेसरले कम्प्रेस गरि भित्र पठाइएको हावा तातो हुने गर्छ । त्यसैले योसँगै इन्टरकुलर पनि लगाइएको हुन्छ । जसले इन्जिनमा धेरै मात्रामा हावा पठाउँछ र यसरी पठाइएको हावाले इन्धन बल्न सहयोग गर्छ ।
यसको मुख्य फाईदा आर्थिक बचत हो । कम पेट्रोलको खर्चमा बढि पावर उत्पादन गर्ने क्षमता टर्बो-इन्जिनको रहेको हुन्छ । टर्बो चार्जर भएको इन्जिनले हाई अल्टीच्यूटमा पनि उत्कुष्ट कार्य गर्छ । सामान्य इन्जिनमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा अक्सिीजन कम हुने हुँदा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन भने टर्बो चार्जरले इन्जिनमा अक्सिजनको फ्लो बढाउने काम गर्छ । जसले गर्दा इन्जिनको प्रफर्मेन्समा केही फरक पर्दैन ।
त्यस्तै टर्बोयूक्त इन्जिनमा कम सिलिण्डर भएको भए पनि बढि सिलिण्डर सरहनै पावर जेनेरेट गर्ने क्षमता हुन्छ । फलस्वरुप कम सिलीण्डर यूक्त इन्जिनको प्रयोगले फिउल पनि कमनै खपत गर्छ र कम इन्धनमै बढि दूरी पार गराउछ । साथै, इन्जिनमा कम सिलिण्डर प्रयोग भएको हुनाले इन्जिनको तौल र साइज पनि कम नै हुने गर्छ ।
टर्बो चार्जर यूक्त इन्जिनमा टर्बोले काम गर्नका लागि इन्जिन राम्रोसँग चलिसकेको हुनु पर्छ सो क्रममा इन्जिनबाट एक्जस्टसम्म धुवाँ जानका लागि केही समय लाग्ने भएकाले यसले प्रफमेन्स देखाउन केही थप समय लाग्छ । त्यस्तो अवस्थालाई टर्बोल्याग भनिन्छ । तर यो केही सेकेन्डको कुरा मात्र हो । हालको समयमा टर्बो इन्जिन सामान्य इन्जिन भन्दा केही महँगो पनि रहेको छ ।
कारको सिटबेल्ट नबाँध्दा द...
इलेक्ट्रीक गाडी आयातमा रम...